ဇွန် 2015 |5၏စာမျက်နှာ 18 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 5)
Sud ထုတ်လွှင့်အတွက် RAI ရဲ့စေ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူ Live
အတူသုံးနာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရုပ်သံပြပွဲကာလအတွင်းအများအပြားဇာတ်ကောင်ကစားခြင်းထက်ပို 40 အနုပညာရှင်တွေ - ကအနည်းဆုံး 120 ဝတ်စုံအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြခြင်းမ - RAI အသံကအင်ဂျင်နီယာ Giacomo Ramaglia သူထိုကဲ့သို့သောဒဏျခတျစစ်အစိုးရနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အလွန်အကြမ်းခံမိုက်ခရိုဖုန်းလိုသိသည်။ , Sud လုပ် program ကို, အပတ်တိုင်းသန်း 2.5 အထက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်ဆွဲဆောင်ကြောင်းပေးထား ...
Markkleeberg / ဂျာမနီမှာကနူး Slalom ဥရောပချန်ပီယံရှစ်မှာ slomo.tv ရဲ့videoReferee®အဘို့ကို Premiere
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အနူးကမ္ဘာ့ဖလားအစည်းအရုံး ICF ကဗီဒီယို 28 31 မှမေလ 2015 အကြားတွင်စီရင်တော်အဘို့အသစ်တစ်ခုစမ်းသပ် system ကိုအသုံးပြု, ဥရောပ Slalom canoeists ၏အထက်တန်းလွှာဟာကနူး Slalom ဥရောပချန်ပီယံရှစ်များအတွက်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယှဉ်ပြိုင်စဉ်အတွင်းနိုင်ငံတကာကနူးအဖွဲ့ချုပ် ICF ယခုvideoReferee® system ကိုသုံးပြီး, ဗီဒီယိုကိုစစ်ကြောစီရင်စနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်အတွက်ဒေသခံစီစဉ်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ မှာ ...
ဗြိတိန် Richmond ရုပ်ရှင်ပွဲတော်န်ဆောင်မှုများတစ်ဦး DPA ဃရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးကုမ္ပဏီငှားရမ်း: ဒီခြွင်းချက်ထုတ်ကုန်ပိုင်ဆိုင်ဗြိတိန်သာကုမ္ပဏီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအောင်, 4041-SP condenser မိုက်ခရိုဖုန်း dicate ။ စံ 48V Phantom ပါဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ဒီဇိုင်း, အဃ: dicate 4041-SP အနေနဲ့အတော်လေးနိမ့်ဆူညံသံကြမ်းပြင်နဲ့လုံးဝပွင့်လင်းအသံလမ်းကြောင်းကိုပေးထားပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းလက်မအရွယ်မြှေးနှင့်အတူ ...
D-စမတ်ရွေးချယ် Broadpeak ဖြေရှင်းချက်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်စွာမှ Multiscreen တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစားသုံးမှုအတွက် Peak ကိုစီမံခန့်ခွဲ
RENNES, ပြင်သစ် - ဇွန်လ 23, 2015 - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Broadpeak, content တွေကိုဖြန့်ဝေကွန်ရက် (CDN) နည်းပညာများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူအသက်ရှင်နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများအတွက်ဗီဒီယို On-demand (VOD) ဆာဗာများ, IPTV, OTT, ဟိုက်ဘရစ်တီဗီ, နှင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ, ယနေ့ တူရကီ DTH provider က D-စမတ်က၎င်း၏ OTT ဝန်ဆောင်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုထောကျပံ့ဖို့ Broadpeak ရဲ့ umbrellaCDN (TM) ဖြေရှင်းချက်ချထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ D-စမတ်သည် dynamically, Broadpeak ရဲ့ဆုရ CDN ရွေးချယ်ရေး tool ကိုလို့ရပါတယ်အသုံးပြုခြင်း ...
Technicolor PostWorks မှာပြီးစီးတီဗီမြေဟာသ "Younger"
Colorist အန်သိုနီ Raffaele သစ်ကိုစီးရီးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော, ဟာသကြည့်ပေးကမ်းခြင်း၌ဆုရရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ယောဟနျသသောမတ်စ်ကူညီမှုပေးပါသည်။ တီဗီမြေရဲ့မှုတ်သွင်းခံအသစ်များကိုဟာသ၏ပထမဆုံးရာသီအတွက် NEW YORK- Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုပြီး Younger မကြာသေးမီကနယူးယောက်, Technicolor PostWorks မှာပြီးစီးခဲ့ခဲ့သည်။ အကြီးတန်း Colorist အန်သိုနီ Raffaele buzz ထုတ်လုပ်ပြီးပြီးကြီးထွားလာသည့်မူရင်းစီးရီးမှနောက်ဆုံးအရောင်တန်းလျှောက်ထား ...
တားမြစ်ထားလက္ခဏာတွေမြောက်အမေရိကအတွက်သုံးနယူး Forscene Reseller များ
လန်ဒန် - ဇွန်လ 23, 2015 - အကောင်းဆုံးအသံလွှင့်, အဆိုပါ Matrx, နှင့် Z စနစ်များ - တားမြစ်ထားစျေးကွက်-ဦးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို Forscene ၏ထုတ်လုပ်သူ, ယနေ့မြောက်အမေရိကအတွက်အသစ်သုံးမျိုးကိုပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်များကြေညာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားချိန်းကမ္ဘာအနှံ့ Forscene ၏စျေးကွက်ဝေစုချဲ့ထွင်ရန်ရဲ့တားမြစ်ထားမဟာဗျူဟာ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြသည်။ အကောင်းဆုံးအသံလွှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တစ်ဦး System Integration ဖြစ်ပါတယ် ...
Bluebell မောရှေ- အခြေခံ. စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် GUI ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ MNC Software များဘုံဘိုင်
Berkshire, ဗြိတိန် - ယနေ့က MNC ရဲ့ Mosaic ကိုကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အခြေခံပြီးသူ့ရဲ့ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုတ်ကုန်များအတွက် SMNP စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကဖန်တီးရန် MNC Software များဝင်ရောက်ခဲ့သည်ထားပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Bluebell Opticom, Ltd. , fixed နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ application များအတွက်ဆန်းသစ် fiber optic ဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေး, - ဇွန်လ 23, 2015 ဆော့ဖျဝဲပလက်ဖောင်း။ Bluebell ယင်း၏ BC363 နှင့် BC364 ကိုထောကျပံ့ဖို့အသစ်ကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်စနစ်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ် ...
ဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS, နွေရာသီအရောင်းသွက်စီးရီး၏သတ်မှတ်မည်မှအသံဖုန်းများအတွက် '' နယူး 688 ဆောင်ကြဉ်း
ဟောလိဝုဒ်, ဇွန် 23, 2015 - အသံဖုန်းများအတွက်ယင်း၏အုတ်မြစ်အသစ်အ 688 ရောနှော / အသံဖမ်းမိတ်ဆက်မကွာပြီးနောက်ဝါရင့်သံကိုအင်ဂျင်နီယာဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS, အများအတွက်ကြောင့်အလုပ်သမား, လယ်ပြင်၌ရှိသောကြောင့်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် ငါဆိုလိုတာကသလားနိုင်သလားသစ်ကိုတနာရီကြာအား NBC ဟာသအမျိုးမျိုးစီးရီး! လူရွှင်တော် / ရုပ်ရှင်မင်းသား Marlon Wayans ဖွငျ့ Hosted ငါဒါကလုပ်ပါနိုငျ! ...